9 Chekutanga Zviratidzo zve Psoriasis Arthritis [Zviratidzo uye Zviratidzo zveClinic]
24 / 03 / 2019 /0 Comments/i rheumatism/av kundikuvadza
Psoriatic arthritis chirwere chemhezi chakabatana.
Psoriatic arthritis inogona kukonzera maronda uye kuzvimba mukati menhengo dzako. Heano zviratidzo zvipfumbamwe zvepakutanga zvinokubvumidza iwe kuti uzive iyi rheumatic diagnosis panguva yekutanga nhanho.
Psoriasis chirwere chinozivikanwa cheganda chinokonzera silvery, ganda rinopenga pamabvi, scalp nemabvi. Anenge makumi matatu muzana evaya vane chirwere ichi cheganda anokanganiswazve ne psoriatic arthritis. Psoriatic arthritis inonyanya kukanganisa musana neminwe - uye inotungamira pakurwadziwa pamwe chete, kuomarara uye kuzvimba.
Isu tinorwira avo vane kumwe kurwara kusingaperi kwekurwadziwa uye zvirwere kuti vave nemikana iri nani yekurapwa uye kuongororwa - chimwe chinhu chisiri munhu wese anotenderana nacho, zvinosuwisa. Govera chinyorwa, sesu pane yedu FB peji og yedu YouTube chiteshi (tinya pano) munhau dzezvemagariro kubatana nesu mukurwira hupenyu hwese hwepamoyo kune avo vanorwara nemaronda.
Mune chino chinyorwa, tinofamba kuburikidza nezviratidzo zve9 zvekutanga zve psoriatic arthritis iyo inokutendera iwe kuti uzive chirwere ichi pakutanga - uye nekudaro uwane kurapwa kwakanaka. Pazasi pechinyorwa iwe unogona zvakare kuverenga zvakataurwa kubva kune vamwe vaverengi.
1. Kuzvimba kwemaziso
Isu tinotanga nechiratidzo chinowanzo shamisa vazhinji - ndiko kuzvimba kweziso. Vanhu vane psoriatic arthritis vane yakakwira chiitiko chekuputika mumaziso. Izvi zvinogona kusanganisira kushatirwa, kurwadziwa, maziso akatsvuka, kuzvimba uye akatsvuka ganda rakatenderedza maziso.
Kuzvimba kwakadaro kwemaziso kunonzi uveitis. Kana iwe uchirwara ne psoriatic arthritis, iwe une 7-17% mukana wekuvandudza rudzi urwu rwekuputika kwemaziso - iko kuzvimba kunogona kutungamira kukuona kwematambudziko uye kukanganisa kwekuona nekuda kwekushaikwa kwekurapwa. Kurapa kwacho kunonyanya kurapa mushonga uye kudzikisa kuzvimba.
Izvi zvinosimbisa kukosha kweichi chinyorwa. Kuongororwa kwepakutanga kunogona kuona kuti maziso ako akachengetedzwa uye kuti kuzvimba kwacho hakukuvadzi mutsipa weziso kana kumwe kukuvara.
VIDEO: Mafuta e5 Movement evaya vane Soft Tissue Rheumatism
Kudzikama uye zvipfeko zvinodzorwa uye kurovedza muviri kunogona kukubatsira kuderedza kushushikana kwemuviri nepfungwa mumuviri wako. Muvhidhiyo iri pazasi iwe unogona kuona chirongwa chekurovedza muviri uine mashanu akasiyana maekisesaizi anogona kukubatsira iwe kudzikisa kusagadzikana.
2. Kuzvimba uye kuwanda kwemvura kuunganidzwa mune majoini
Chiratidzo chechiratidzo chearoriatic arthritis uye mamwe marudzi echirwere chejoini chakabatana chirwere cheArthritis. Kuzvimba kwemajoini kuchakonzerawo kutsvuka kweganda, kupisa uye kuzvimba kwemuno.
Uturu hwekuzvimba hunoburitsa kupisa nekuda kwekuwedzera kwebasa rekuputika. Yakabatanidzwa yakaomeswa inogona kunzwa kupisa kana yabatwa. Wakanga uchiziva here kuti kune zvakasikwa zvekudzivirira-nhanho nhanho kurwisa kuzvimba kwakadaro? Iwe unogona kuverenga zvakawanda nezve izvi kuburikidza nekubatanidza pazasi.
Verenga zvakare: 7 Kurapa kwechisikirwo kwePsymaasis Arthritis
Pano iwe unogona kuverenga zvimwe kanomwe akasiyana masikirwo ekurapa psoriasis arthritis.
3. Kurwadziwa kwakadzika kumashure (Lumbago)
Psoriatic arthritis yakabatana zvakananga nekuwedzera kwezviitiko zvekutambudzika muzasi kumashure - inozivikanwa zvakare sezasi kumashure. Izvi zvinogona kuuya sekushamisika kune vazhinji vedu - nekuda kwekuti psoriatic arthritis inotungamira kune ese arthisheni uye kuchengetedza kwemvura.
Izvi zvinhu zvinotungamira kune yakawanda mvura mukati memubatanidzwa pachawo - izvo zvinozotungamira mukudzikisira kufamba uye kurwadziwa pamwe. Kunyanya kubatana kwemashure kumashure ayo anonyanya kukonzera kuwedzera kune kurwadziwa kune avo vane psoriatic arthritis. Vazhinji vane mhedzisiro yakanaka yekurapwa neino chiropractor kana physiotherapist yezvirwere zvakadaro.
Nekudaro, zvakakosha kuti utaure kuti hausi iwo chete wezasi musana unonyanya kutambura nekurwadziwa kune avo vane psoriatic arthritis - uye zvimwe zvakawanda zvinokanganisa rheumatic. Kumwe kuongororwa uko kunowanzo kubata boka remurwere kunodaidzirwa Kusimbisa mutsipa. Iwe unogona kuverenga zvimwe pamusoro peichi chinyorwa kubva kuRåholt Chiropractor Center uye Physiotherapy mune chinyorwa pazasi.
Icho chinongedzo chinovhura muwindo idzva.
4. Misumari inodonha uye zviratidzo zvechipikiri
Psoriasis arthritis inogona kukonzera zvipikiri kupaza zvachose kana chikamu kubva kumapikiri. Izwi rekurapa reichi chiitiko rinodaidzwa onycholysis. Kupatsanurwa kwembambo kwakadai kunogona kuitikawo nekuda kwekukuvara - semuenzaniso nekurova chigunwe kumucheto kana kana ukatsikwa panguva yemutambo wenhabvu.
Izvi zvinogona kuitika pamaoko ese nemakumbo. Iri idambudziko rinoshungurudza iro rinobata vazhinji veavo vane psoriasis arthritis uye iyo inogona zvakare kutungamira mukuoma kwekufamba kana kufamba. Vazhinji vanogona kuzviona zvichinyadzisa kana kudzivirira mumwe kubva kumagariro. Zvipikiri zvinokwanisa kukanganisika nediki diki (dents) mune chipikiri chimiro pachako.
Nenzira, waiziva here kuti mamwe marudzi ezvikafu uye zvekudya anogona kubatsira kurwisa kuzvimba mumhasuru nemajoini? Iyo 'fibromyalgia yekudya' inotevera yenyika kudya uye nhungamiro uye inogona kuve nemhedzisiro kune avo vane rheumatic kusagadzikana. Unogona kuverenga zvakawanda nezvazvo muchinyorwa chiri pasi apa.
5. Akazvimba minwe uye zvigunwe
Kuzvimbirira kweminwe nezvigunwe kunozivikanwawo se dactylitis - uye ndicho chimwe chezviratidzo zvakasimba zve psoriatic arthritis. Mune vanhu vazhinji, psoriatic arthritis inotanga kutanga mune madiki majoini emaoko kana tsoka. Aya mamiriro anozivikanwa zvikuru sausage minwe kana ichiitika muminwe.
Vanhu vazhinji vangangoshamisika kuti kuzvimba kwakadaro kunoiswa seimwe yechokwadi zviratidzo zvepsoriatic arthritis - uye nharo dzekuti izvi zvinoitikawo mune mamwe marudzi erheumatism. Hazvina kunaka. Psoriatic arthritis ndiyo mamiriro ayo anokonzeresa zvigunwe zvese kana zvigunwe kuzvimba - kwete chete majoini pachawo.
Kune rheumatologist, zvakakosha kwazvo kuti uzive nezve mamwe masikirwo ekurwisa-kupisa matanho - kunze kwemishonga Via chinongedzo pazasi iwe unogona kuverenga zvimwe nezve zvisere zvisikwa matanho ayo anogona kukubatsira kuti uchengetedze kuzvimba, kusanganisira enthesitis, synovitis uye tendinitis, mukutarisa.
6. Psoriasis Arthritis uye Tsoka Pain
Psoriatic arthritis inogona kukonzera chiitiko chakawedzera chekurwadziwa mumakumbo nemakumbo. Izvi zvinodaro nekuti avo vane psoriatic arthritis vanowanzo kanganiswa ne enthesitis - kureva mamiriro apo iwe unowana marwadzo mune tendon yekubatanidza pachayo apo iyo tendon inosungira kune iro pfupa.
Mumakumbo uye makumbo mairi izvi zvinogona kuve sekuzivikanwa sekurwadziwa, kuzvimba uye kumanikidza kuseri kwechitsitsinho (Achilles tendon) kana pasi petsoka (plantar fascia). Pakati pezvimwe zvinhu, izvi zvinogona kukonzera kurwadziwa kana uchidzika mangwanani - zvakafanana nefaranti fasciitis uye kuti zvinorwadza mushure mekumhanya kwekufamba. Isu tinofara kukurudzira kushandisa plantar fasciitis compression masokisi kune iwe uri kunetswa netsoka uye kurwadziwa chitsitsinho (chinongedzo chinovhura muhwindo idzva).
Kungofa-paya uye pinda "vhura muhwindo idzva" kana uchida kuenderera mberi nekuverenga chinyorwa ichi mushure.
7. Psoriasis Arthritis uye Elbow Pain
Kupindirana, kurwadziwa uye kuzvimba kwemapati tendon kunogona zvakare kurova zvigaro. Izvi zvinokonzeresa marwadzo etendonesi maererano ne elbow tenesi - inozivikanwawo seyakanyanya epicondylitis. Zviratidzo zvepasirose zvinogona kusanganisira kurwadziwa kwegwara, kuderera kwekusimba simba uye kurwadziwa kwemwena panguva yekuzvitambisa kana basa remanyorero.
Matambudziko eTendon anokwanisa kukonzeresa kuti ave zvakanyanya kudzvanywa-kana kubata nzvimbo dzakakanganiswa. Mune mamwe mazwi, avo vane psoriatic arthritis vanewo mukana wekuwedzera wekuva nematambudziko e-tendon uye tendonitis.
Kumanikidza wave wave kurapa inzira yemazuva ano yekurapa iyo inogona kupa zororo zororo uye kugadzirisa mashandiro. Iyi nzira yekurapa inowanzoitwa nevashandi vezvehutano vanobvumidzwa zviri pamutemo - senge chiropractor kana physiotherapist.
Verenga zvakare: Chii Chaunofanira Kuziva Nezvekumanikidza Wave Kurapa
8. Kuneta uye kuneta
Kufanana nezvimwe zvinoongorora rheumatic, chirwere chematsenga chinogona kukonzera kupfuurira, autoimmune mhinduro mumuviri. Izvi zvinoreva kuti immune system yemuviri inogona kuramba ichirwisa maseru emuviri. Hazvishamise kuti izvi zvinoda huwandu hwesimba kubva kune vakakuvara - izvo zvinogona kukonzera kuneta.
Kuneta uye kupera simba zvinongoreva kuti unogara uchinzwa kuneta uye simba. Vanhu vazhinji vane psoriasis arthritis vanonzwa kuti vakaneta zvakanyanya pakupera kwezuva uye kuti kazhinji vanofanirwa kurara masikati.
Verenga zvakare: Zvese zvaunoda Kuti Uzive nezve Psoriasis Arthritis
9. Joint Kuomarara uye Kurwadziwa
Sezvambotaurwa, psoriatic arthritis inokonzeresa mukati memumajoini - muchimiro chekuzvimba uye kuunganidzwa kwemvura. Shanduko idzi dzinogona kukonzera majoini kuti anzwe kusindimara nekufamba uye kuve kunorwadza kana kunorwadza zvakananga mune zvimwe zvinzvimbo.
Nekudaro, sekumwe kurapa, avo vane psoriatic arthritis vane chiitiko chakawedzera chekurwadziwa. Vanhu vazhinji saka vanowedzera kutsamira pakuchengeta mashandiro achienda kuburikidza musanganiswa wemuviri kurapwa uye epamba kurovedza muviri. Iwe uchawana mazano ezviitwa zvakadaro pa yedu Youtube chiteshi (tinya apa).
Verenga zvakare: Nyorera kune yedu Youtube Channel yeMahara Exercise Chirongwa
Pachiteshi unowana akati wandei mavhidhiyo ekudzidzisa ayo anogona kukubatsira iwe kuti uwane hupenyu hwezuva nezuva huri nani. Icho chinongedzo chiri pamusoro chinovhura muwindo idzva.
Bata izvi kuti ugovane zvimwe. Kutenda kukuru kune wese munhu uyo ​​anobatsira kukurudzira kuwedzera kwekunzwisisa rheumatism.
NEXT PAGE: 7 Kurapa kwechisikirwo kwePsymaasis Arthritis
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/psoriasis-artritt.jpg?media=1648573622 368 700 kundikuvadza https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 kundikuvadza2019-03-24 20:06:342021-03-24 10:58:389 Zviratidzo Zvepakutanga zvePfungwa
6 Maekisesaizi ekudzivirira Akakoshesa Mutsipa Osteoarthritis Fibromyalgia uye Mimba